WINDOWS 10 IPHUTHA 0X80004005 'IPHAKHEJI YEMODI YONJINIYELA YEHLULEKILE UKUFAKA' - I-WINDOWS 10
Iphutha le-Windows 10 0x80004005 “Iphakheji Yemodi Yonjiniyela Yehlulekile ukufaka”
Vuliwe Windows 10 ungavumela Imodi Yonjiniyela kusuka kuhlelo lokusebenza Lwezilungiselelo> Ukuvuselelwa nokuphepha> Konjiniyela> Imodi yonjiniyela, Ukuhlola izinhlelo zokusebenza ezakhiwe nguwe. Futhi, ungaqalisa izinhlelo zokusebenza kusuka ku-Visual Studio kumodi yokulungisa iphutha. Ngokunika amandla le modi, ungagijima iBash Windows 10 futhi ufinyelele izilungiselelo eziningi zonjiniyela ngaphansi kophahla olulodwa. Ngokuya ngeMicrosoft Enifying mode ye-Developer izovumela uku:
Okuqukethwe umbukiso 1 Iphakheji Yemodi Yonjiniyela Yehlulekile ukufaka 1.1 Lungisa iphutha 0x80004005 1.2 Qala kabusha iWindows Services ehambisanayo
Iyafaka Amawindi idivayisiportal futhi uyilungiselela imithetho ye-firewall
Ukucushwa kwemithetho ye-firewall ye- Igobolondo Eliphephile ( I-SSH ) izinsizakalo zokuvumela ukufakwa okukude kwezinhlelo zokusebenza
Inika amandla Uhlelo olungaphansi lweWindows lweLinux lokho kukuvumela ukuthi ugijime UBash ku-Ubuntu ngaphakathi Amawindi isistimu Esebenzayo ( Nina )
Iphakheji Yemodi Yonjiniyela Yehlulekile ukufaka
Lesi Isici esihle sokwamukela ku-Windows 10, ikakhulukazi konjiniyela. Kepha Abanye abasebenzisi beWindows babika ngenkathi Vumela Inketho yemodi yonjiniyela kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-Amasethingi> Ukuvuselelwa nokuphepha> Konjiniyela> Imodi yonjiniyela, kulandela iphutha Iphakheji yemodi yonjiniyela yehlulekile ukufaka Iphutha 0x80004005.
Leli phutha likhombisa ukuthi izinto ezingeziwe ezidingekayo yi-OS ukunika amandla okungeziwe izici zokususa iphutha kuWindows Device Portal noma i-Visual Studio ayikwazanga ukufakwa ngokuzenzakalela.
Lungisa iphutha 0x80004005
Cindezela iWindows + R, thayipha regedit futhi kulungile ukuvula umhleli weRegistry registry,
Isipele sedatha yokubhalisa, bese uzulazulela kukhiye olandelayo:
HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Izinqubomgomo Microsoft Windows WindowsUpdate AU
Ngaphakathi kufolda, hlela i-UseWUServer bese usetha inani layo libe ngu-0
Vala isihleli sokubhalisa bese uqala kabusha amawindi. Manje phinda unike amandla imodi yonjiniyela.
Qaphela: Uma ungenayo ifolda ye-windowsupdate bese uchofoza kwesokudla ku-Windows -> ukhiye omusha bese uyiqamba ku-Windowupdate. Phinda uqhafaze kwesokudla ku-windowsupdate -> ukhiye omusha bese uyiqamba nge-AU. Manje chofoza ku-AU nakwifasitelana eliphakathi nendawo uchofoze okusha -> dowrd32 -> uyiqambe ku-UseWUServer. Qhafaza kabili ku-UseWUServer bese usetha inani libe ngu-0.
Qala kabusha iWindows Services ehambisanayo
Manje vula i-Command Prompt Njengomphathi Futhi Ukuqalisa kabusha ezinye izinsizakalo ezihlobene nokubuyekezwa kweWindows zenza imiyalo egqamile ngamunye ngamunye bese ucindezela ukhiye we-Enter ngemuva kokukhishwa ngamunye.
ama-net stop bits
ukuqala kwenetha wuauserv
amabhithi okuqala wenetha
net ukuqala cryptsvc
Yilokho konke Ukuphuma kohlobo ukuze uvale umyalo we-oda bese uqala kabusha amawindi ngemuva kwalokhu.
Manje Futhi vula uhlelo lokusebenza lwe-Izilungiselelo> Ukuvuselelwa nokuphepha> Konjiniyela> Imodi kanjiniyela, Ngiyethemba Ngalesi sikhathi lokhu kuzonika amandla ngempumelelo ngaphandle kwephutha.
Ungalilungisa Kanjani i-DNS Server engaphenduli Iphutha ku Windows 10
I-Fix System Restore ayiqedanga ngempumelelo ku-Windows 10
Ungayifaka kanjani i-Flush DNS Resolver Cache ku Windows 10, 8.1 no-7
iwindows 10 update 1803 iqhubeka yehluleka
i-itunes ayikwazanga ukuxhuma kwi-iphone engaziwa iphutha
discord ihlolela izibuyekezo zeluphu
windows 10 ukufakwa kunamathele kuma-99
ungasheshisa kanjani amawindi we-chrome 10
windows 10 ukufaka kulenga kuma-99
ukuxhumeka kwendawo akunako ukumiswa kwe-ip okuvumelekile